Podcast 2x01 ee Actualidad iPad: Waxaan soo bandhigeynaa xilli | Wararka IPhone
Podcast 2 × 01 ee Actualidad iPad: Waxaan soo bandhigeynaa xilli
Waxaan ku soo bandhignay xilli ciyaareedkeenii labaad ee iPad News Podcast oo leh isbeddelo badan. Dabcan waan sii wadi doonnaa inaan falanqeyno wararka Apple, laakiin sidoo kale waxaan u baneyneynaa inta ka hartay wararka teknoolojiyadda ee muuqda oo laga yaabo inay xiiso leedahay. Intaas waxaa sii dheer, muusiga, shineemooyinka iyo taxanaha telefishanka ayaa iyaguna boos ku lahaan doona baahintayada toddobaadlaha ah ee aad sida tooska ah ula socon karto Spreaker oo dabcan dhageyso markaad rabto iTunes. Haddii aad rabto, sidoo kale waxaad ka dhagaysan kartaa ciyaaryahanka aan hoos ku soo darno.
Dhageyso »2 × 01: Waxaan ku soo bandhigeynaa xilligii Podcast-ka Actualidad iPad-ka Spreaker.
Waxaan kugu sugeynaa Podcast-ka soo socda si aad si toos ah noolala qeyb gasho, taasoo noqon doonta Arbacada Sebtember 9 kadib khudbadda Apple
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » Podcast 2 × 01 ee Actualidad iPad: Waxaan soo bandhigeynaa xilli
Barnaamijka GoPro waa la cusbooneysiiyay si loogu daro tifaftiraha fiidiyowga
Apple TV 4 wuxuu la jaan qaadi doonaa kontaroolada Bluetooth